Waxbarashada dugsiyada dhexe iyo heerka labaad
Kor ku laabo.
Magaalada Espoo waxay dadka ku nool Espoo siinaysaa tallaalka kahortaga COVID-19. Cudurka COVID-19 ee uu sababo cudurka karoona fayras wuxuu si gaar ah ugu daranyahay dadka waayeelka ah iyo dadka qaba xaaladaha u saadaalin kara noocyada daran ee cudurka.
Markaad is tallaasho, waad ka difaaci kartaa nafsadaada COVID-19. Ujeedada tallaalku waa in la yareeyo astaamaha uu sababo COVID-19 iyo in laga hortago noocyada daran ee cudurka. Cudurka safmarka ah ee COVID-19 ma dhammaan doono ilaa iyo inta badan dadka laga wada tallaalayo.
Espoo waxay u fidisaa talaal bilaash ah COVID-19 qofkasta oo doonaya. Tallaalladii ugu horreeyay waxaa la siiyay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee daaweeya bukaanada COVID-19 iyo dadka ka weyn 70 sano jir. Kuwa halista ugu jira inuu ku dhaco nooc daran oo ah COVID-19 ayaa la tallaali doonaa marka xigta. Intaas ka dib, dadka intiisa kale ee qaangaarka ah waa la tallaali doonaa, laga bilaabo kan ugu weyn. Macluumaad ku saabsan cidda hadda la tallaalayo, booqo www.espoo.fi/koronarokotus.
Sidee loo qaataa tallaalka kahortaga COVID-19:
Markay tahay waqtigaaga tallaalka, sii qabso ballan tallaalka ah koronarokotusaika.fi ama adoo waceysa 09 816 34800 Isniin–Jimco 8:00–18:00.
Tani waa adeeg dib-u-wicitaanka ah. Markaad wacdo lambarka, lambarkaaga waa la diiwaan galini dib ayaan kusoo wici doonnaa. Adeega waxaa lagu heli af Finnish, af Iswiidhish iyo af Ingiriis. Waxaan sidoo kale adeegsanaa barnaamijka tarjumaadda ee Túlka. Waxa laga yaabaa inay muddo qaadato ka hor inta aan dib laguugu yeerin, laakiin qof kastaa wuxuu heli doonaa dib-u-wicitaan. Dib-u-wicitaannada waxaa la sameeyaa waqtiga lagu jiro maalinta, fiidyada iyo maalmaha fasaxa ah.
Tallaallada COVID-19 waxaa ballan loogu bixiyaa goobaha tallaalka. Tallaalka hadda waxaa ku jira laba qaadasho. Waxaa lagu siin doonaa ballan ah qaadashada labaad ee tallaalka markaad qabsato ballantaada ugu horreysa ama ugu dambeyey, ee la xiriirta tallaalkaaga ugu horreeya.
Espoo waxaa ku yaal afar meelood oo la iska tallaalo:
Xarunta Caafimaadka ee Tapiola, Ahertajantie 2
Xarunta Dukaameysiga ee Iso Omena, dabaqa 2aad, Suomenlahdentie 1
Goobta tallaalka ee Lintuvaara, Veräjäkallionkatu 3
Xarunta Tallaalka ee Metro Areena, Urheilupuistontie 3
Booqashadda xarunta tallaalka waa badqab, markaad maskaxda ku hayso tilmaamaha soo socda ee goobta tallaalka:
U imow ballantaada si joogta ah oo ugu macquulsan si aad u hubiso in aan dad badan iskuugu imaanin goobta tallaalka.
Ka noqo ballantaada haddii aad isku aragto wax calaamado ah oo u dhigma COVID-19. Calaamadaha caadiga ah waxaa ka mid ah qandho, qufac, dhuun xanuun, neefta oo kugu yar, murqo xanuuno, caajisnimo, xaalad guud oo hoos u dhac ah iyo, caadi ahaan, dhadhan la'aan iyo urin.
Diyaarso inaad caddeyso aqoonsigaaga, tusaale ahaan, kaarka aqoonsiga.
Dhaq gacmahaaga ama isticmaal gacma nadiifiye.
Ka fogee masaafa ahaan ugu yaraan laba mitir kuwa kale.
Isu diyaari inaad kuharto kormeerka ugu yaraan 15 daqiiqo tallaalka kadib.
Waxaad ku imaan kartaa goobta tallaalka gaari, baaskiil, lugeyn ama gaadiidka dadweynaha.
Haddii aad qaadatay COVID-19, waxaan kugula talineynaa inaad dib u dhigato tallaalka illaa qiyaas ahaan 6 bilood ka dib bilawga astaamaha ama ogaanshaha cudurka.
Ka dib markii lagu tallaalo, waxaa muhiim ah inaad sii wado inaad ka fogaato si ammaan ah dadka kale, u fiirso gacanta wanaagsan iyo nadaafadda qufaca, xiro maaskaro, iska baarto haddii ay calaamado soo baxaan oo aad raacdo tilmaamaha kale ee lagu xakameynayo COVID-19.
Ma u baahantahay in lagaa caawiyo qabsashada ballanta tallaalka? Miyaadan hubin goorta ay tahay xilligaaga lagu tallaalaayo? Waad wici kartaa Barta Macluumaadka ee Muhaajiriinta si lagugu la taliyo. Waxaa lagugu adeegi doonaa luuqadaada ama waxaad kuheli doontaa luuqada finnishka oo faahfahsan. lataliyaasheena waxay ku hadlaan Finnish, Iswiidhish, Ingiriis iyo Kurdi. Luqadaha kale, waxaan adeegsanaa turjubaanno. Taleefoon. 040 636 8097, Isnini–Khamiis 10:00–16:00 iyo Jimca 9:00–12:00. www.espoo.fi/neuvontapiste
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaaladda: espoo.fi/koronarokotus.
Ha isu soo uruurina – cudurka COVID-19 wuxuu ku faafaa xafladaha, kulamada asxaabta iyo xarumaha dukaameysiga.
Haddii ad goob gudaha ah ku qabanqaabinayso munaasabad gaar ah, waxaa joogi kara ugu badnaan toban qof. Haddii ad munaasabad gaar ah ku qabanqaabinayso goob bannaan ah, waxaa joogi kara ugu badnaan 50 qof.
Goobaha gudaha ah waxaa laakiin lagu qabanqaabin karaa munaasabado dad ugu badnaan toban qof ah ay iskugu imanayaan ama haddii ay bannaanka tahay ugu badnaan 50 qof, haddii amniga la sugi karo.
Muyuseeyumyada iyo xarumaha dhaqanka goobahooda bandhigyada waxaa loo furayaa macaamiil tiro yar bisha Juun bilowgeeda laga bilaabo. Goobaha dabbaasha ee bannaanka iyo kuwa guduhu way furanyihiin. Waxaa la qaabilayaa bar ka mid ah macaamiisha caadiga la oggolyahay.
Fadlan xiro maaskaro marka aad keenaysid ama kaxaynaysid ilmahaaga.
Waxbarashada dugsiyada dhexe iyo heerka labaad (dugsiyada sare iyo machadyada xirfadda) waxay ku laabanayaan laga billaabo 3.5.2021 waxbarashada dugsiga lagu qaadanayo.
Gooaha gudaha iyo iyo bannaanka ee ay magaaladu maamusho waxaa waxqabadka hiwaayadda loogu qabanqaabinayaa dadka dhashay sannadkii 2001 iyo kuwa ka sii yar oo kaliya
Iska ilaali safarka aan loo baahnayn. Waxaad safartaa, marka ay qasab kugu tahay oo kaliya.
Finland waxaa la imaan karaa oo kaliya haddii aan laga maarmin. Sababaha lagamamaarmaanka ah waxay noqon karaan tusaale ahaan waxbarasho, qoys ama shaqo.
Hoggaanka ilaalada xuduudaha ayaa gaaraya go’aanka ah in masaafurku uu Finland gelayo iyo in kale.
Waad ku soo laaban kartaa markasta Finland, haddii
aad tahay muwaadin Finnish ah
aad tahay xubin qoyseedka muwaadin Finnish ah.
Marka aad Finland timaado ayeey saraakiishu ku weydiinayaan baaritaanka Koronaha
Haddii aad tagtay baaritaanka Koronaha wax kayar saddex maalmood kahor imaatinkaada, waxaad saraakiisha tusi kartaa caddaynta baaritaanka.
Haddii aadan tegin baaritaanka Koronaha, baaritaan ayaa laguugu hagayaa
Uma baahnid in aad aaddo baaritaanka Koronaha, haddii uu kugu dhacay cudurka fayruska Korona wax kayar lix bilood kahor. Waxaad markaas saraakiisha tustaa caddaynta jirrada.